Video: Farshaxanka Muuqaalka Xogta | Martech Zone
Video: Farshaxanka Muuqaalka Xogta
Arbacada, Janaayo 29, 2014 Arbacada, Janaayo 29, 2014 Douglas Karr
Marka aan la shaqeyno xogta iyo xog uruurinta waaweyn iyo macaamiisha, waxaan ogaanay in xogta ay aad u khatar badan tahay markii si khaldan loo tarjumay ama loo turjumay. Suuqleyda ayaa mararka qaar ka faa'iideysta tan si ay ugu rogaan tarjumaadda macaashka macaamilka. Tani waa nasiib darro maadaama ay u horseedi karto rajooyin la seegay. Xogta oo la fiiriyaa waxay noqon kartaa khiyaano, laakiin xogta muuqaalka ayaa noqon karta mid wax sheegta.
Markii aan la shaqeyneyno shaxanka, amarka muuqaalka wuxuu u baahan yahay inuu ahaado sheeko ballaadhan illaa iyo macluumaad kooban oo taageeraya sheekada. Naqshadeynta ayaa ah waxa sheekada iyo xogta isku keenaya si ay si hufan farriinta ugu gudbiyaan. Waxaan badiyaa bilownaa cilmi baaris iyo naqshadeyn isku waqti ah si aanan u oggolaan in xogtu ay dhaafto ama u weeciso sheekada guud. Waxaan aaminsanahay in naqshado badan oo infographic ah ay ka bilaabmaan tanno xog ah oo kaliya ay ku hunqaacayaan qaab quruxsan. Istaatistikadu way fiican yihiin, laakiin sheekadu aad ayey uga muhiimsan tahay stats-ka!
Tani waa mid aad uga gaaban PBS oo ku saabsan muuqaalka xogta:
Tags: Muujinta Xogta
10 Sababood oo Ganacsatada Yaryar aysan u indha indheyn karin Baraha Bulshada
Pingdom: Waxqabadka, Korjoogteynta, iyo Maareynta